रोहिङग््यासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव म्यानमारद्वारा अस्वीकार – Medianp
बुधबार, २८, कार्तिक, २०७५
रोहिङग््यासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव म्यानमारद्वारा अस्वीकार
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, मङि्सर २१, २०७४१०:०४
याङ्गुन, २१ मङसिर । म्यानमारका रोहिङग््या समुदायका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावको म्यानमारले विरोध गरेको छ ।
राष्ट्रसंघीय मानअवधिकार आयोगद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा म्यानमारको सेनाले बलजफ्ती गरेर राखिज राज्यबाट रोहिङग््यालाई लखेटेको भनी प्रस्ताव गरिएको छ ।
सेनाले नागरिकलाई कारबाहीका नाममा तर्साएको, जसका कारण उनीहरु देश छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति आउदा पनि सरकारले उनीलाई रोक्नका लागि कुनै पहल नगरेको भनी सो प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
विगतमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकाले यही धारणा राख्दै आएका थिए । यस धारणाको म्यानमार सरकारले विरोध गर्दै आएको थियो ।
यसै मङ्गलबार पनि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगमा सो प्रस्तावका बारेमा छलफल भएको थियो । त्यस प्रस्तावप्रति म्यानमारको सरकारले आफ्नो अस्वीकृति जनाएको बताइएको थियो ।
पछिल्ला केही महिना अघि भएका हिंसात्मक गतिविधि पछि सेनाले चलाएको सैनिक अभियानबाट बस्न नसकेर म्यानमारको रोहिङग््या समुदायका नागरिक देश छोडेर भागेका थिए ।
विशेषगरी रोहिङग््याको बसोबास रहेको म्यानमारको राखिन राज्यबाट करिब छ लाख २० हजार जनता भागेर बङ्गलादेश पुगेका थिए । यसरी भागेका शरणार्थी हाल बङ्गलादेशको कोक्स बजार क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् ।
म्यानमारको सुरक्षाकर्मीले चलाएको पछिल्लो अभियानलाई अमेरिकाले अल्पसङ्ख्यक रोहिङ्ग्या समुदायलाई राखिनबाट हटाउने प्रयास भनी आलोचना पनि गर्दै आएको छ । अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघ मात्र नभएर विश्व समुदायले नै म्यानमार सरकारको यो कदमको निकै विरोध गरेको छ ।
विश्वभरबाट म्यानमारको रोहिङग््या शरणार्थीलाई फिर्तागर्न माग गरिरहेको समयमा म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङसान सुकी र बङ्गलादेशका विदेश मन्त्री ए एच महमद अलिबीच म्यानमारको न्यापितमा दुई हप्ताअघि भएको बैठकले रोहिङग््या शरणार्थीलाई फर्काउने सहमति गरेको बताइएको थियो ।
सहमतिअनुसार तीन हप्ताभित्र कार्यदल बनाई काम शुरु गरिने बताइएको थियो । तर सो प्रक्रिया भने अहिलेसम्म पनि सुरु हुन सकिरहेको छैन । कति रोहिङग््यालाई स्वदेश फर्काइँदैछ र यो प्रक्रिया कहिलेसम्म सम्पन्न हुनेछ भन्ने बिषयमा दुवै पक्षले प्रष्ट बोलेका छैनन् । तर अब बस्ने बैठकले यी विषयमा पनि निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजधानीको मध्य भागमा डेढ घण्टा हिँडेर मतदान
एक सय पाँच वर्षीयदेखि एक सय पन्ध्र वर्षीया वृद्धाद्वारा मतदान
वर्षा र हिमपातको सम्भावना ! तीन दिन सम्म देशभरको मौसम यस्तो हुनेछ !
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ढुंगाबाट बनेको बुद्धमूर्ति मुक्तिनाथमा निमार्ण , हेर्नेहरुको भिड लाग्यो (यस्तो छ सुन्दर तस्विर हेर्नुहोस)
२०२२ मा कतारमा आयोजना हुने विश्वकपमा नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिने, तयारी यस्तो छ हेर्नुहोस
चर्चित वैज्ञानिकलाई जब विषालु सर्पले टोक्यो ,तब उपचारको सट्टा आफ्नो जिज्ञासा मेटाउन लेखे आफ्नै मृत्युको कहानी
वाइनबाट चल्छ प्रिन्स चाल्र्सको कार, खाना पकाउने तेलबाट चल्छ महारानीको शाही रेल
यो हो विश्वको सबैभन्दा अचम्मको मोटरसाइकल ,जसलाई देखेपछि तपाईको होसहवास नै उड्छ (भिडियोसहित )
ट्रम्प र किम जाेङकाे ‘लभ’मा फेरी किन अायाे दरार ?
बहुमूल्य रुबीले उठिबास, गाउँलेहरु भन्छन्-यो हाम्रा लागि अभिशाप भयो
केही समय अगाडी फोन गरेर बुबालाई लिन बोलाएकी एक युवतीको रहस्यमय मृत्यु
कृत्रिम चन्द्रमा पछि सूर्य पनि बनाउँदै चीन ! १० करोड डिग्री तापक्रम हुने
म पेलेजस्तो हुन सक्दिनँः एमबाप्पे
ओली र बामदेवको सम्बन्ध टुट्दै ! माधव, बामदेव र नारायणकाजीको नेकपामा शक्तिशाली गुट
बार्सिलोनाका डेम्बेलेलाई ८५ मिलियन पाउण्ड खर्चेर जनवरीमा लिभरपुलले भित्र्याउने
परिक्षामा चिट चोर्ने मामिलामा केटीहरू अति नै अगाडि, यस्ता स्थानमा यसरी लुकाउछन् चीट हेर्नुहोस् (फोटोसहित)
‘डान्स प्लस ४’मा नेपालका सुजनको अर्को दमदार प्रस्तुति, जजले खुलेरै गरे तारिफ (भिडियो)
सावधान ! यस कारण हुन्छ युरीक एसिड याद गर्नुहोस् !
श्रीमान भन्दा धेरै नै मोटी छन् बलिउडका यी ४ नायकहरु (तस्विरसहित)
औँठी लगाइदिए पछी रोएकी दिपिकालाइ यसरी फकाए रणवीरले , एकाएक भावुक बन्यो माहोल